people Nepal » आजको राशिफल : असोज २३ गते / अक्टोबर ९ तारिख सोमबार आजको राशिफल : असोज २३ गते / अक्टोबर ९ तारिख सोमबार – people Nepal
आजको राशिफल : असोज २३ गते / अक्टोबर ९ तारिख सोमबार
आज श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल आश्विन २३ गते सोमबार इश्वी सन २०१७ अक्टोबर ९ तारीख कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थीतिथी चन्दमा बृष राशिमा सूर्य दक्षीणायन शरद ऋतु, विश्व हुलाक दिवस –
स्थीर क्षेत्रको लगानिका निम्ती कुलकुटुम्बहरुको साथ सहयोग आवश्यक रहनेछ । खानपानको अस्थीरताले स्वास्थ क्षेत्रमा सामन्य तनाव उत्पन्न हुनसक्नेछ । अध्यन अध्यापनमा मानसिक चन्चलताकाकारण समय त्यति उत्तम देखिदैन । आत्मिय ब्यत्तिहरुबाट धोका हुन सक्नेछ ।
दीर्धकालिन कार्यका क्षेत्रमा लगानि लगाउने उत्तम समय रहेकोछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनाले रोकीएर रहेका कार्यहरु सहजता पूर्ण सम्पादन हुनेछन । पारीवारिक क्षेत्रमा सामान्य असमजदारीको सामना गर्नु पर्नेछ । जिवन साथीको सरसहयोगमा ब्यापार ब्यवसाय मध्यम रहनेछ ।
आम्दानिको तुलनामा अनावश्यक खर्च बढ्नेछ । एकान्त वाताबरणमा मन रम्नेछ । नयाँ कार्य क्षेत्रमा लगानि नगरेकै बेश हुनेछ । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । शत्रु बृद्धि हुनसक्छन् । जिबन साथीको सहयोग द्वारा गरीएका काममा सफलता प्राप्त हुनेछ ।
बाणीका कारण आफ्नो प्रभुत्व जम्नेछ । आय मूलक कार्यमा जुट्ने माध्यम फेला पर्नेछ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । पारीवरिक शुःख प््राप्त हुनेछ । प्रतिस्पर्दा मुलक कार्यमा बिषेश सफलता प्राप्त हुने योग रहेको छ ।
सभा सम्मेलनमा जन्य कार्यमासरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । नेतृत्व गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनमा चन्चलताले बास गरेतापनि ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्नाले दिगो आर्थिक लाभको बाटो बन्न सक्नेछ ।
साथि भाई हरुको खराब संगतका कारण सामान्य अपजस आई पर्नेछ । साझेदारी कामका क्षेत्रमा सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । सामान्य खर्च भएता पनि मनमा चिन्ता भने रहने छैन । सबारी साधनको प्रयोग तथा यात्राका क्षेत्रमा बिशेष साबधानि अपनाउनु होला ।
सामान्य चोट पटकको सम्भाबना रहेको छ । मनोबिलासिताका सामानको क्षेत्रमा सामान्य सञ्चित रकम खर्च हुने योग रहेको छ । बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । मानसिक चन्चलताको कार्य दीधो नरहला ।
परोपकारको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । कुराकाट्ने ब्यक्तिको कमि नरहला । बोल्दा सजग रहनु होला बोलिको कारण नजिकका मित्रजन रुष्ट रहन सक्छन । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पला
सन्तानका कारण मानसिक चिन्ताको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघाटमा मन प्रशन्न रहनेछ । शारिरीक आलस्यताको सामना भने गर्नु पर्ला । आम्दानि क्षेत्र मध्यमनै रहेता पनि इष्टमित्रका निम्ती सामान्य खर्च हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
भौतिक साधनको प्रयोग तथासभा सम्मेलन जन्य कार्य क्षेत्रमासमय ब्यतित हुने योग रहेको छ । पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । धैर्य धारण गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमता मा बृद्धि हुने योग रहेको छ ।
सामान्य कार्यको निम्ती धेरै समय ब्यतित हुनाले मानसीक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । मनमा सामान्य चिताले सताउन सक्छ । नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुन सक्छ । मान्य जनहरुको साथ सहयोमा आम्दानि मध्यम रहनेछ ।